မယ်သံ: November 2012
စင်္ကာပူ မှာ အလုပ်လာလုပ်ရင်း ကိုယ်ဝန်ရသွားတဲ့အခါ မိခင်ကလဲ အနီးမှာ မရှိသလို မိသားစု မှာ ကလေးမွေးတာ ကို အတွေ့အကြုံမရှိခဲ့ရင် တစ်ခုခု ဆို ပုံမှန်အခြေအနေလား ၊ စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေလား ၊ ဘာတွေ ပြင်ဆင်ရမလဲ ဆိုတာကို မသိဘဲ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် ။
အလုပ်တဘက် နဲ့ မို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ ရဲ့ ပင်ပန်း၊နေမကောင်းမှူတို့ ကို အနားယူဘို့ ခွင့်ယူရတဲ့ အခက်အခဲ ၊ ခံတွင်းမကောင်းလို့ စားချင်ရာလေးတွေကို အလွယ်တကူ မစားရတဲ့ အခက်အခဲ တို့ကတော့ မလွဲမသွေ ရင်ဆိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ မှာ ဆေးစစ်၊ဆေးခန်းပြရမှာတွေ ၊ အဲလိုပြဘို့ အတွက် ကုန်ကျစားရိတ်တွေ ကို သိထားဘို့ ရာအတွက် ကျမ ကတော့ ဒီဘလော့ (၃) ခု ကို အားကိုးခဲ့ပါတယ် ။
သူတို့ ဆီ မှာ အသေးစိတ်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ ကိုယ်တိုင် ရဲ့ အခြေအနေ နဲ့ တိုက်ဆိုင်ပြီး လိုအပ်တာတွေကို ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ် ။
ကိုယ်ဝန် ၁၄ ပတ်မှာ FA Scan ဖတ်ပြီး ကျမရဲ့ ကိုယ်ဝန်ဟာ ပုံမှန်အခြေအနေ ဖြစ်ပြီး မိခင်ရော ၊ ကလေးပါ စိုးရိမ်စရာ မရှိတာကို သိပြီးနောက် ဘယ်မှာ မီးဖွား မလဲဆိုတာကို စဉ်းစားရပါတယ် ။ ကံကောင်းတာက ကျမတို့ အိမ်ထောင်ဟာ ဘယ်ကိစ္စမဆို နှစ်ဦး တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းကြတဲ့ အလေ့အထ ရှိတာပါဘဲ ။ ဒီမှာ မွေးရင် လက်ခံရမဲ့ အားသာချက် ၊ အားနည်းချက် နဲ့ ဟိုပြန်မွေးရင် ရင်ဆိုင်ရမဲ့ အားသာချက် ၊ အားနည်းချက်တွေ ကို အတူလေ့လာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ် ။
ကျမ က လက်ရှိ အလုပ်လုပ်နေသူ ဖြစ်ပြီး မီးဖွားပြီးတဲ့အခါလဲ အလုပ်ပြန်လုပ်မှ ဖြစ်မဲ့ အခြေအနေမို့မီးဖွားဘို့ အတွက်ပေးနိုင်မဲ့ အချိန်ကိုပါ တွက်ထားရပါတယ် ။ ပုံမှန် ကျန်းမာရေး ရှိသူအတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလဟာ ၉ပတ် နဲ့ ၁၀ရက် ရှိပါတယ် ။ ဓမ္မတာနောက်ဆုံးလာတဲ့ရက်ကနေ စပြီးတွက်ရတာပါ ။ ကိုယ် ပြနေတဲ့ ဆရာဝန်ကလဲ မီးဖွားမဲ့ ဂျူးဒိတ်ကို တွက်ပေးမှာပါ ။ ပုံမှန်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ရက်သတ္တပတ် ၄၀ မှာ ၃၇ ပတ်လောက်ဆိုရင်တော့ သက်တောင့်သက်သာ နားသင့်ပါပြီ ။
တကယ်လို့ ပြန်မယ်ဆိုရင် လေယာဉ် က ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေကို ဘယ်အပတ်အထိ တင်လဲ ဆိုတာကိုပါ ထည့်ပြီးတွက်ရပါတယ် ။ ဒါကတော့ Silk Air က ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေကို ဘယ်အချိန် အထိ တင်တယ်ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်လေးပါ ။( ဒီစာရွက်လေး ကို ရှာပေးတဲ့ သူငယ်ချင်း ဇင်မင်းငြိမ်း ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။)
နောက် HR ဆီမှာ ဖြစ်ဖြစ် ၊ Gov website တွေမှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ ခွင့် ခံစားခွင့်တွေကို လေ့လာရပါတယ် ။ တွက်လိုက်တဲ့အခါ ( Annual Leave 14 days + Maternity Leave 8 Weeks + Unpaid Leave 1 month = 3.5 months) ရနိုင်ပါမယ် ။ ပြက္ခဒိန်မှာ ချတွက်ပြီး ခွင့်စယူမဲ့ ရက်ရယ် လုပ်ငန်းခွင် ပြန်ဝင်နိုင်မဲ့ရက်ရယ် ကိုတွက်ပြီး ကိုယ့်အထက်က စီနီယာ ကို ပြောပြပါတယ် ။
ပြီး မှ HR ကနေတဆင့် သဌေးထံ ပေးနိုင်မပေးနိုင် ခွင့်တင်ရပါတယ် ။ ပုံမှန်ဆို Boss တွေက လုပ်ငန်း လစ်ဟာမှူ ရှိနိုင်လား ၊ အဲဒီအချိန် မှာ ကူညီနိုင်မဲ့သူ ရှိနိုင်လား ဆိုတာ စီနီယာကို မေးမှာပါ ။ ဒါကြောင့် စီနီယာကို ကြိုပြီး ခွင့်ယူမဲ့အချိန် တွက်ရမှာတွေ နဲ့ ကိုယ်ဘာတွေ လုပ်ထားတယ် ဆိုတာ ကို သေချာပြောပြထားရပါမယ် ။ အားလုံးအဆင်ပြေတယ် ခွင့်ရတယ် ဆိုရင် စိတ်ပူပန်ရတာ တစ်ခု သက်သာသွာမှာမို့ ဒီကိစ္စကိုလဲ စောစောစီးစီး ပြင်ဆင်ထားဘို့သင့်ပါတယ် ။
နောက်တစ်ခု က ကုန်ကျစားရိတ်ကို စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ ကျမက ပီအာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီမှာမွေးရင် ကုန်မဲ့စားရိတ်ရယ် ၊ ဟိုပြန်မွေးရင် ကုန်မဲ့ စားရိတ်ရယ်က သိပ်မကွာလှပါဘူး ။ ကုန်ကျစားရိတ်မကွာလှတဲ့ အခါ အမျိုးသားကတော့ စင်္ကာပူမှာဘဲ မွေးစေချင်ခဲ့ပါတယ် ။
နောက်တစ်ခု က ကလေးနဲ့ ကိုယ် နဲ့ ဘယ်လောက်ကြာကြာ အတူတူနေနိုင်မလဲ ဆိုတာ ကို တွက်ရပါတယ် ။
ဒီမှာဘဲ မွေးမယ်ဆိုရင် မွေးတဲ့အချိန် မိဘ လာနေခဲ့ရင် သူတို့ ဒီမှာ ၅ လ နေခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ၅ လကြာလို့ ပြန်တဲ့အခါ ကလေးကို Infant care ကို ပို့မလား ဆိုပြီး အိမ်အနီးအနားမှာ ရှိမရှ်ိ ရှာရပါတယ် ။ ရှိပြီ ဆိုတဲ့ အခါ ဈေးနှူန်းမေးကြည့်တော့ ၂လ - ၁၇ လ အထိ က တစ်လ S$1700.00 ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလိုဆို ကျမ တို့အနေ နဲ့ မထားနိုင်ပါဘူး ။ ကျမ မှာ ညီအမသားချင်း ဆွေမျိုးနီးစပ် လဲ အားကိုးစရာမရှိတဲ့ အခါ အိမ်ဖော်ခေါ်ရင်ရော လို့ စဉ်းစားရပါတယ် ။ စကားမပြောတတ်သေးတဲ့ ၊ လုပ်သမျှ ခံရမှာဖြစ်တဲ့ ကလေးသေးသေးလေးကို တစိမ်းတယောက်နဲ့ အတူထားခဲ့ဘို့ ဆိုတာမဖြစ်နိ်ုင်ပါဘူး ။
မြန်မာပြည် ပြန်မွေးမယ် ဆိုရင်တော့ မမွေးခင် ၄ ပတ်အလို က ကြို ပြန်ရမှာ ဖြစ်လို့ မွေးပြီး ၂လခွဲ မှာ ပြန်လာရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အပြန်ခေါ်လာမယ် ဆိုရင် မိဘတွေ နေခွင့်ရမဲ့ ၅ လပေါင်း အနည်းဆုံး ၇လခွဲ အထိတော့ အတူတူ နေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲတော့ ကလေးကို ဘယ်အရွယ်မှာ လေယာဉ် စီးလို့ ရမလဲ မေးမြန်းရပြန်ပါတယ် ။ ပြန်လာမယ် မှန်းထားတဲ့ ၂လခွဲမှာ စီးလို့ရတယ် ။ နား ကိုတော့ နားကျပ်တပ်ပေးရမယ် ဆိုတော့ စင်္ကာပူမှာဘဲ ကလေးအတွက် နားကျပ်ကို ရှာဝယ်ထားရပါတယ် ။ နောက် ကလေး အတွက် ကာကွယ်ဆေး ထိုးဘို့ အရွယ် ၊ အမျိုးအစား ကို မြန်မာ ပြည်မှာ အစပြု ထိုးလာခဲ့ပြီး ဒီမှာ ဆက်ထိုးဘို့ ဖြစ်နိုင် မဖြစ် နိုင် စုံစမ်းရပြန်ပါတယ် ။
( ကလေး ကာကွယ်ဆေးထိုးမဲ့ အကြောင်း ကို အသေးစိတ် ဆက်ရေးပါမယ်)
အားလုံးကို စဉ်းစားပြီးတဲ့ အခါ ကျမ က မြန်မာပြည်မှာ ပြန်မွေးမယ် လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ။ ကိုချစ်မောင် ကတော့ စင်္ကာပူမှာ ဘဲ မွေးစေချင်ပါတယ် ။
မြန်မာ ပြည်ကို ပြန်မွေးမယ် လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရာမှာ ကျမ မိဘ နှစ်ပါး မြန်မာပြည်မှာနေတဲ့ အခြေအနေ ကို လဲ သေချာ သိချင်လို့ပါ ။ လူကြီး နှစ်ယောက်ထဲ ကျန်းမာရေး က အစ ၊ လူမှူရေး ပါ ဘယ်လို နေကြတယ် အဆင်ပြေ မပြေ ကို သူတို့ အပြောတင်မဟုတ်ဘဲ သေချာ သိချင်ခဲ့ပါတယ် ။ စီးပွားရေးက တော့ သူတို့ မပူပင်ရဘူးဆိုပေမဲ့ ကျမ ပေးပို့တဲ့ အတိုင်းအတာ နဲ့ အဆင်ပြေ ချောင်လည် ရဲ့လားဆိုတာလဲ သေချာ သိချင်တာရယ် ၊ ဒီ ခွင့်ရတဲ့ ၃ လခွဲ မှာ ကိုယ့်မြေ ၊ ကိုယ့်အစားအစာ ၊ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းတွေ နဲ့ ပြန်ထိတွေ့ခွင့်ရမှာမို့ ပြန်မွေးမယ် ဘဲ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ။
မြန်မာပြည်ကို ပြန်မွေးမယ် ဆိုတော့ ဒီကနေ သယ်သွားသင့်တဲ့ ပစ္စည်းစာရင်းပြုစုပြီး ၀ယ်ရ စုရပါတယ် ။ ပြန်မဲ့နေ့အထိ ရုံးတက်မှာမို့ ပုံမှန် ရုံးပိတ်ရက်ကလွဲလို့ သီးသန့် ၀ယ်ချိန် မရှိပါဘူး ။
၁) ပုံမှန်သောက်နေကျ ဆေးများ
၂) ကျမ က တစ်ခုခု ကိုင်ပြီးရင် ဆပ်ပြာသုံးချင်တဲ့ သူမို့ Chemical မပါတဲ့ ဆပ်ပြာ ၀ယ်သွားပါတယ် ။
၃) ကလေး မွေးပြီး၂ ချင်း နို့ မထွက်မှန်းသိထားလို့ ကလေးလေး အတွက် BPA free နို့ဗူး ရယ် ၊ နို့ မှူန့်ဗူးရယ် ကို သယ်သွားပါတယ်။
၄) မိုစတာဖာ သွားရင်း အနှီးတွေ တွေ့တော့ ဒီက အနှီးတွေဟာ နူးညံ့ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် အနှီးကိုလဲ ဒီကဘဲ ၀ယ်သွားခဲ့ပါတယ်။
၅) wet tissue ၊ diapers စတဲ့ အရေးကြီးတာတွေ အပြင် တခြားတိုလီ မုတ်စ လေးတွေ ရော ပေါ့ ။
မြန်မာပြည် ကို ရောက်တဲ့အခါ OG နဲ့ ဆက်ပြ ( OG နဲ့ ပြခ ဟာ ၅၅၀၀ ကျပ် ပါ ။ ဒီမှာ ဆေးခန်းတခါ ပြရင် S$80.00 ကုန်တာမို့ မြန်မာပြည် ရဲ့ စပယ်ရှယ်လစ် ဆရာဝန်တစ်ယောက် ယူတာဟာ ၁၀ ပုံ ၁ ပုံဘဲ ရှိပါတယ်။) ပြီး SSC မှာ မွေးခဲ့ပါတယ် ။ ဒီမှာ မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး မထိုးတဲ့ အတွက် ဟိုမှာ ထိုးရပါမယ် ။
SSC မှာ ခွဲမွေးမယ် ဆိုတော့ သူတို့ မှာတာတွေ ထဲမှာ
ခွဲမွေးမဲ့ နေ့ မှာ နေကောင်းနေရပါမယ် ၊ အအေးမိတာ ၊ ချောင်းဆိုးတာ မဖြစ်အောင် ဂရုစိုက် နေရပါမယ် ။ ဒီကြားထဲမှာ လမ်းသိပ်မလျှောက်ပါနဲ့ ဆိုတာကို တော့ ထူးထူးခြားခြား မှတ်မိနေပါတယ် ။
နောက်တပို့စ် မှာ ကလေး နဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း ( မြန်မာ ၊ စင်္ကာပူ ) ကို မှတ်မိသလောက် အသေးစိတ် ရေးပါ့မယ် ။ အားပေးကြပါဦး ။
မိခင်လောင်းများ နှင့်တကွ မိခင်များ ၊ ဘလော့ လာဖတ်ကြတဲ့ မိတ်ဆွေများ အားလုံး ကိုယ်ရော စိတ်ပါ ကျန်းမာ ရွှင်လန်းကြပါစေ လို့ ဆုတောင်း လိုက်ရပါတယ် ရှင် ။
Posted by Thandar Lwin at Friday, November 30, 2012
၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ၁၃ရ၄ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ (ဥပုသ်နေ့)
(၁၃) အနာကုလ ကမ္မ န္တ မင်္ဂလာ
အပြစ်ကင်းစွာ စီးပွားရှာ မှန်စွာတိုးတက်မှာ
ခိုးယူလုယက် တိုက်ခိုက်ရယူတာမပါဘဲနဲ့ ဖြူစင်စွာ စီးပွားရှာတာ၊ ကာယအား ဥာဏအားနဲ့ရှာဖွေနေတာဟာ အနာကုလ ကမ္မ န္တ မင်္ဂလာပဲ ။
၀မ်းစာရေးအတွက် စီးပွားရှာကြတဲ့အခါ အပြစ်ကင်းစင်ဖို့လိုတယ် ။ သူတကာ မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကျရောက်အောင် ပြုလုပ်ရယူတဲ့ စီးပွားရေးဟာ အပြစ်မကင်းဘူး ။ ဘယ်သူတွေ ဘာဖြစ်ဖြစ် ငါကြီးပွားရင်ပြီးရော ဆိုတဲ့ စိတ်ထားနဲ့ စီးပွားဥစ္စာ ရှာဖွေရင် ယခုဘ၀ စီးပွားဥစ္စာ တိုးတက်မြင့်မားပေမဲ့ နောင်ဘ၀မှာတော့ အောက်တန်းကျမှာပဲ။
ဆွေမျိုးအတွက် . . .
နောက်ဆုံး မိခင် ဖခင်အတွက်နဲ့ သံသရာ မနစ်မွမ်းရအောင် (သမ္မာအာဇီဝ) တရားသောနည်းလမ်း နဲ့ စီးပွားဥစ္စာ ရှာဖွေကြရမယ်။
ဖြူစင်စွာရလာတဲ့ စီးပွားဥစ္စာ နဲ့ လှူဒါန်းမှလည်း အပြစ်ကင်းစင်မယ် ။ ပါရမီကုသိုလ်လည်းဖြစ်မယ်။ သူတော်စင်တိုင်း အနာကုလကမ္မ မင်္ဂလာနဲ့ ညီအောင် သမ္မာအာဇီဝ အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ လုပ်ငန်းနဲ့ စီးပွားဥစ္စာရှာကြပါလေ ။
Posted by Thandar Lwin at Tuesday, November 27, 2012
ဖတ်သိ မှတ်သိ ကြားသိ ခဲ့ရသော စလေ ဦးပုည အကြောင်း (၂)
ဦးပုည ၏ ကိုယ်နေဟန်ပုံသဏ္ဍန်မှာ အရပ်မနိမ့်မမြင့်၊ အသားလတ်၍ နှာတံစင်း၊ နဖူးကျယ်၊ ရင်ကားပြီးလျှင် ညာဘက်လက်မှာ တံတောင်ဆစ်မှ လက်ဖျားသို့အထိ သေးသိမ်၍ အသုံးမပြုနိုင်ချေ။ သို့ ညာဘက်လက်သေးသိမ်သည်မှာ ၀မ်းတွင်းပါ ဖြစ်ချေသည်။ ထို့ကြောင့် စာရေးသားရာတွင် ဘယ်လက်ဖြင့် ရေးသားရရာ ပုရပိုက်ကို ဒေါင်လိုက်ထား၍ ရေးသားရပေသည်။
ထိုသို့ ရေးသားရသော်လည်း လက်ရေးမှာ အလွန်မြန်ခြင်း၊ ညီညွတ်လှပခြင်း ၊ ဖျက်ရာမရှိခြင်း ဖြစ်၍ အထူးပင် ချီးမွမ်းဖို့ ကောင်းပေ၏ ။ တေးထပ် ၊ ရကန် ၊ လေးချိုး ၊ ဒွေးချိုး စသည် တု့ကို ရေးသားသောအခါ မရေးသားမီ ဆေးပေါ့လိပ်တစ်လိပ် ကို ကုန်အောင်သောက်ကာ ထည့်သွင်းလိုသည်တို့ကို စဉ်းစား၍ အစ အဆုံး တောက်လျှောက်ရေးသားသီကုံးသည်။ စာတစ်ခါရေးလျှင် ပေရွက်ပေါ်မှ ကျသော အမှူန်အမွှား နို့ဆီ ( ၃)ဗူးမျှ ရရှိကြောင်း မှတ်သားရသည်။
ရွှေအမြုတေ မှ မောင်လင်းခိုင် ရေးသော ဦးပုည (သို့မဟုတ်) စာပေသမားတို့၏ ဘိုးအေကြီးအကြောင်း တစေ့တစောင်း (http://www.shweamyutay.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3150&Itemid=0) တွင် မူ ဦးပုည အကြောင်းမှာ တမျိုးကွဲသည် ။
ဆရာကြီး ဦးပုညသည် အချုပ်တန်း ဆရာဖေနှင့် ကဗျာတိုက်ပွဲ တိုက်ခဲ့ ကြသည်။ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ငယ်ကျိုးငယ်နာ ဖော်၍ တိုက်ခဲ့ကြသည်။ ဆရာဖေက ဦးပုညလက်ခွင် လက်သိမ်သည်ကို ကဗျာရေး ဖွဲ့၍ တိုက်ခဲ့သည်။ ဆရာကြီး ဦးပုညသည် ညာဘက်လက် လက်ခွင်လက်သိမ်၍ ဘယ် ဘက်လက်နှင့် စာရေးရသည်။ ဤသည်ကို ဆရာဖေက စာဖွဲ့၍ တိုက်ခဲ့သည်။
“ကဗျာစီ မောင်ပုည ထောင်ဂုဏ် ပြထုတ်လျှင် တောင်ခြုံက ပုတ်သင်လို ကုတ်ခွင်သိမ်လက်သေး၊ မင်းမြှောက်လို့ သင်းလောက်ကျော်သည်။ ထွင်း ဖောက်အောင် ဥာဏ်မျိုးနှင့်လေး”
ဆရာဖေက ငယ်ကျိုးငယ်နာ ဖော်၍ ရေးသဖြင့် သူကလည်း ဆရာဖေကို သူ၏ လက်သိမ်ရပုံကို ရေးပြခဲ့သည်။
“တရုဏီရွယ်ကာလ ငယ်ခါက ကျောင်းနေ၊ ဘယ်ညာချစောင်း အနေမှာ လောင်းကဝေ ငါ့အား၊ အိပ်ပျော်ခိုက်ဘ အလာမှာ မကာသ တွန်းချလေငြား၊ သို့အတွက် လက်ယာသိမ်သည် ငါက၀ိန် သူ့အား၊ ဘာအလိန် လူ့ငနွားရယ်က အရှု မှားလေတယ်၊ ငဖေရယ်စလေတုပေ မယ့်၊ မေရုနှင့် မြင်းမိုရ်ကွာမယ်၊ သူရာ နှင့် သိကြားနှယ်၊ ဘုရားဝယ် မာရ်နတ်သို့၊ စာတတ်နှင့် အသူပမာ၊ အဲ သလောက်ကွာ၊ ကေ၀ဋ်နှင့် မဟော သဓာလို အတော် ကွာခြားတာမို့လေး”
ဦးပုညသည် သူအမှန်တကယ် လက်သိမ် ရခြင်းကို ဖြေရှင်း ရေးပြခဲ့သည်။ သူကျောင်းသား အရွယ် ရောက်ကာမှ တစ်ည အိပ်နေရာတွင် ဖခင်က အိပ်ရာမှ လန့်ကာ သူ့အား ယောင်မှား၍ တွန်းချ လိုက်သဖြင့် လိမ့်ကျ ထိခိုက်ခဲ့သည်။ ဆေးကုပါသော်လည်း ကုမရတော့ဘဲ ညာလက်သိမ် သွားခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာကြီး ရေးသားချက်မှာ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သူငယ်စဉ် မိဘ နှစ်ပါးက သာယာဝတီ မင်းထံ ခေါ်သွားစဉ်က စည်တွေပုတ် ကစားနေသဖြင့် ဘုရင်က မောင်ပုတ်စည်ဟု အမည် ပေးခဲ့ကြောင်း လက်သိမ်နေလျှင် ပုတ်ကစားနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
လက်သိမ်သည့် အကြောင်းသာ ကွဲ သည်မဟုတ် . . .
မြင်ကွန်း၊ မြင်းခုံတိုင် အရေးအခင်းတွင် အခါ ပေးမိသဖြင့် မင်းပြစ်မင်းဒဏ် သင့်ရလေသည်။ မင်းတုန်းမင်းက ခေါ်ယူ စစ်မေးပြီး မြို့ဝန် ဦးသာအိုးထံတွင် အပ်နှံထားလေသည်။ ဆရာကြီးသည် ဗေဒင်အရာ ကျွမ်းကျင်လှသဖြင့် ဦးသာအိုး၏ အငယ်အနှောင်းများက ဗေဒင် လာရောက် မေးမြန်းကြသည်။ သူ၏ အငယ်အနှောင်းများ ၀င်ထွက်သွားလာ နေသည်ကို မြို့ဝန်ဦးသာအိုးက မရှုစိမ့် ဖြစ်လာကာ ပါးကွက် အာဏာသားတို့အား ဦးပုညကို သတ်ခိုင်း လိုက်လေတော့သည်။ ဦးပုညကို သတ်ရာ၌လည်း သုတေသီတို့ ဖော်ပြချက်များအကွဲကွဲဖြစ် နေပြန်တော့သည်။ တချို့က ထောင်ထဲတွင် လည်မျိုကို သံတုတ်နှင့် ရိုက်သတ် ကြောင်း၊ တချို့က အာဏာသားများ သည် ညဉ့်အချိန် အီကင်း ဆိပ်ကမ်းသို့ ယူသွားပြီး သဲအိုးထုပ် ဆွဲ၍ မြစ်ထဲသို့ ပစ်ချလေ၏။ တချို့ကမူ မင်းညီမင်းသားများ မဟုတ်၍ ကတီ်္တပါအိတ်နှင့် စွပ်ကာ သတ်ခြင်းကား မဟုတ်။ ၀က်တုပ် တုပ်၍ အိုးဆွဲချ သတ်သည်ဟု ဆိုပြန်သည်။ ဆရာကြီး၏ မွေးဖွားသည့် မိဘအမည် များကလည်း အကွဲကွဲ အပြားပြား ဖြစ်၍ သေရတော့လည်း သေနည်း အမျိုးမျိုး ကွဲပြား နေပြန်တော့သည်။
သေခြင်း အမျိုးမျိုး ကွဲပြားခြားနား သော်လည်း၊ ကျွန်တော် ဖတ်ရသည့် အမျိုးသား ပညာဝန် ဦးဖိုးကျား ပြုစုသည့် ရေသည်ပြဇာတ် ဦးပုည အကြောင်းတွင်မူ အထောက်အထားနှင့် ပြဆိုပုံမှာ အလွန် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလှသည်။ ဆရာကြီး ဦးဖိုးကျားက ရာဇ၀င်နှင့် မြန်မာစာပြ ဆရာ ဦးသက်တင်၏ ရေးသားချက် များကို ကိုးကား၍ ဦးပုညသည် ရေတွင် မသေကြောင်း ရေးသား ထားပါ သည်။ အလွန် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်း လှသဖြင့် ဆရာကြီး ဦးဖိုးကျား၏ ရေးသားချက်ကို ဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။ ဟုတ် မဟုတ်၊ မှန် မမှန် သုတေသီတို့ ရှာဖွေဖော်ထုတ် ညှိနှိုင်းကြရန်သာ ဖြစ်ပါ သည်။
မြို့ဝန်ဦးသာအိုးက ၁၂၂၈ ခု သီတင်းကျွတ်လ္ဆုပ် ၁၃ ရက် ညသန်း ကောင်ကျော်တွင် အီကင်း ရေဆိပ်သို့ ချ၍ သတ်စေခဲ့၏။ ထိုသို့ စီရင်လိမ့်မည်ကို တင်ကူးသိနှင့်၍ ဆရာကြီး၏ အသက်ကို ကယ်တင်မည်ဟု ကြံစည် ဆောင်ရွက်ကြသူတို့ကား ဦးသာအိုး၏ မယားငယ် ခင်သုံ၊ အစ်မခင်မှုံ၊ ခင်မှုံ၏ ခင်ပွန်း ကိုသူရ၊ ပုသိမ်မြို့ပွဲစားကြီး ဦးညိုတို့ ဖြစ်ကြလေသည်။ ထို ၄ ဦး တို့တွင် ဦးညိုက ငွေကြေး အကုန်အကျ ခံ၍ သူသတ်သမားတို့နှင့် တိုင်ပင်ကာ ရေချမည့် နေရာတွင် ပိုက်ကွန် ခံထားကာ ဆရာကြီး၏ အသက်ကို ကယ်လိုက်ကြလေသည်။
ကယ်ပြီးနောက် ဆရာကြီးပါ ၅ ယောက် တိုင်ပင် ညီညွတ်ကြသည့် အတိုင်း ဆရာကြီးကို ရှမ်းပြည်နယ် ဖြတ်၍ သံလွင်မြစ်ကြောင်း စုန်ကာ အင်္ဂလိပ် ပိုင်မော်လမြိုင်သို့ကို သူရ ကြဉ်းဆောင် လာခဲ့လေသည်။ မော်လမြိုင်သို့ ရောက်မှ ဦးညို၏ အစ်မ ဒေါ်နှင်းရီနှင့် ခင်ပွန်း ဦးဂွယ်တို့၏ နေအိမ်တွင် ခိုပုန်းနေလေ သည်၊ မော်လမြိုင်မြို့တွင် ၁၂၃၆ ခုနှစ် ထိနေပြီး အထက်က သတင်း ကြားသိ မလုံပုံ ပေါ်ပြီး ကရင်နီနယ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ နေရာတွင် ၁၂၃၇ ခုနှစ်၌ ဆရာကြီး ဖျားနာ၍ အနိစ္စ ရောက်လေသည်။
ဆရာကြီး အသက်ဘေးမှလွတ်၍ မော်လမြိုင်သို့ ရောက်မှ ၁၂၂၈ ခု ပြာသို လဆန်း ၉ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ ဦးညိုအား ရေးစပ်ပေးသည် ဆိုသော တေးထပ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
စူရတီ တလိုင်းမ၊ မှိုင်းကျလို့ မွေးလာ ရိုင်းမဟာ့ပဂေးချာ ခွေးသာသာ သာအိုး။
ဈေးတော်ရုံ မင်္ဂလာ လူမြင်ရာ ဓမြဦးလို့ သူကောင်းသား တန်ပြန် သရမ်း ဥာဏ်နသိုး။
ကြငှာန်းစံယူ ပျိုးလို့ လူဆိုးက မြို့ဝန်။
စလေကို အသေချွတ်မယ်လို့ ငကေ၀ဋ်ကျေးဆက် ကံကျွန်။
လောင်းမဟော့ ဥာဏ်တံခွန်လို အကြံချွန် မောင်ညို့ကြောင့် မသေမြို့ ရွာစည်ပျော် ချမ်းသာရနော်။
ခင်သုံမိ လွတ်ရေးဖော်သည် ကျေးမဟော်တနှုံးပလေး။
သည်တေးထပ်ကို ဆရာကြီး အသက်ဘေးမှ လွတ်မြောက်ပြီးမှ ရေးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ အမှန်တကယ် ရေးခဲ့၊ မရေးခဲ့ ဆိုသည်ကိုကား သုတေသီတို့ ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ကြရန်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ဖတ်ရ၊ သိရသမျှတွင်မူ ဦးပုညကို ဦးသာအိုး သတ်ပစ်ပြီး ၅ လလောက် အကြာတွင် မင်းတုန်းမင်း ကြီးက ဦးပုညအား သတိရ၍ မေးတော် မူလေ၏။ ဦးပုညကိုကြည်ညိုသူတို့က ဆရာကြီးသည် ဦးသာအိုး သတ်၍ သေလေပြီဟု လျှောက်တင်ကြရာ နှမြောတသစွာဖြင့် “လူကိုခွေးသတ်လေပြီတ ကား”ဟု ပြောတော်မူလေ၏။
“ငါနှင့် ငါ့ညီတော် အိမ်ရှေ့မင်းတို့ သည် မောင်ပုညအား ဘေးမဲ့ ပေးတော်မူပြီး ဖြစ်သည်။ မောင်သာအိုးသည် အလွန် မိုက်သောလူ ဖြစ်ပေသည်”ဟု နှမြော တသစွာဖြင့် ဆိုခဲ့ကြောင်းသာ ဖတ်ခဲ့ရဖူး သည်။ ယခုကဲ့သို့ ဆရာကြီး ဦးပုည အသက်ဘေးမှ လွတ်မြောက်ပြီး တေးထပ်ပင် ရေးစပ်ခဲ့သေးသည်ဟု တွေ့ရှိရရာ အလွန်ထူးဆန်း လှပေသည်။သုတေသီတို့ ရှာဖွေသိရှိ ထားလျှင်လည်း အများပြည်သူများ သိရှိနိုင်ရန် ဖော်ထုတ် ရေးသားကြစေ လိုပါသည်။
ဟူ၍ ဆရာမောင်လင်းခိုင်မှ ရေးသားခဲ့ရာ သေဆုံးပုံမှာ လဲ ကွဲပြားသည်ကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည် ။
၂) ယိုးဒယားနိုင် မော်ကွန်း - ၅၆ ပုဒ်။
၃)ရတနာနဒီ မော်ကါန်း - ၂ ပုဒ်။
၄)သဒ္ဒါပုဒ်စစ်လင်္ကာ - ၁၇ ပုဒ်။
၅)မဉ္ဇူသကသတ်ပုံ - ၁၃ ပုဒ်။
၆)ဗေဒင်ဟောနည်း၊ ရတု -ရကန်၊တေးထပ်၊လေးဆစ်အမျိုးမျိုး။
၈)တေးထပ်ပေါင်း တစ်ထောင်ခန့်နှင့် ဒွေးချိုးအမျိုးမျိုး။
၁၁)ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်းစသောဝတ္ထု - ၃၀ ခန့်
၁၂) မေတ္တာစာအမျိုးမျိုး၊ ပုဒ်ရေ ၆၀ ကျော်နှင့် ဖိတ်စာအမျိုးမျိုး။
၁၃)သာသနာလျှောက် နှင့် ဆွမ်းတော်ကြီးစာတမ်း။
၁၄) ရေစက်ချအမျိုးမျိုး နှင့် ၃၂ ပါး လက္ခဏာတော် ဘုရားရှိခိုး။
၁၇)ပဒုမပြဇာတ် (အချို့မိဖုရားများ အကျင့်ပျက်သဖြင့်၊မင်းတရားကြီးအမိန့်အရ မိမိကညေပာပေးသည်ကို စာရေးများကလိုက်ရေးရသည်။ ခဏချင်းဖြင့် ပြီးသောဟူ၏)
၁၈)ဝေဿန္တရာပြဇာတ် ( မိန်းမမြတ်များရှိကြောင်း၊ မိဖုရားများကရေး၇န်တောင်းပန်သဖြင့် ရေးသည်။)
၁၉)၀ိဇယပြဇာတ် ၉မြင်ကါန်းစသောမင်းသားတို့ဆိုးသွမ်းမည်ကိုသိတော်မူသဖြင့် အိမ်ရှေ့မင်းအမိန့်အရ ၂ ရက်ဖြင့် အပြီးရေးသည်။)
၂၁)ရေသည်ပြဇာတ် (နောင်တော်မင်းတရားကြီးအားမပြစ်မှားသင့်သည်ကို ပြစ်မှားမိသဖြင့် ၀န်ချတောင်းပန်သည့်သဘောများပါသည့်စာကို ညီတော်အိမ်ရှေ့မင်းက သီကုံးရေးသားစေသဖြင့် ရေးသည်။)
၂၂)မဟောသဓာပြဇာတ် ( စလေငခွေးပြဇာတ်၊ ဘယနာဂပြဇာတ် တို့ကိုလည်းရေးသားသေးသည်ဟု သိရှိရပေသည်။)
၁) ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်း ၀တ္ထု
၂) ယုန်မင်း ၀တ္ထု
၃) သိဝရာဇ်မင်းကြီး ၀တ္ထု
၄) ကာက၀လ္လိယ ၀တ္ထု
၅) သူအိုမကြီး ၀တ္ထု
၆) ၀ိသယှသူဌေး ၀တ္ထု
၇) အဘယမာတာ ရဟန္တာမ ၀တ္ထု တို့ကို
မမေဓာဝီ ၏ တွေးမိတွေးရာ . . . ရေးမိရေးရာ . . . ဘလော့ (http://maydar-wii.blogspot.sg/2011/06/blog-post_22.html) တွင် သွားရောက်ဖတ်ရှူနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည် ။
နောင် အဆင်ပြေသောအခါ ဦးပုည ၏် ကဗျာ များကို ရှာဖွေ ပြီးဘလော့တွင် တင်ပါအုံးမည် ။
" တောထွက်ချင်စိတ်ကယ်နှင့် သပိတ်ကိုလွယ် ၊ သားရေနွယ်ကွယ့် ရှာတုန်း။
ချောင်အနီးမှာလ ၊ မောင်ကြီးကို တစ္ဆေကိုက်လိမ့်မယ်၊
မင်း လိုက်ခဲ့ဦး ။" ။ စလေဦးပုည
ဖတ်သိ မှတ်သိ ကြားသိ ခဲ့ရသော စလေ ဦးပုည အကြောင်း (၁)
ကျမ ငယ်စဉ် သိတတ်သော အရွယ်မှ စ၍ အထက်တန်းပညာအောင်သည် အထိ စလေမြို့တွင် ကြီးပြင်းလာခဲ့သောကြောင့် စလေဦးပုည ရာဇ၀င်များကို အမျိုးမျိုး ကြားသိခဲ့ရပါသည် ။ တချို့ကို နားထဲတွင် ပြန်ကြားယောင်သော်လည်း သေချာ ချ ရေးမည် ကြံသောအခါ ယောင်ဝါးဝါးဖြစ်ရပါသည် ။
၂၀၀၄ ခုနှစ် တွင် စလေသို့ နောက်ဆုံးပြန်ခဲ့စဉ်က စလေဦးပုည ဧ။်လက်ရေးမူရင်း ပေချပ်များ ကို စလေမြို့ဧ။် အထင်ကရ ရုပ်စုံကျောင်းတွင် မှတ်မှတ်ထင်ထင် တွေ့ခဲ့ရပါသည်။
ငယ်စဉ်က ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ယဉ်ကျေးလိမ္မာသင်တန်း တက်ခဲ့စဉ်က ပိဋကတ်တိုက်တော် အတွင်းတွင် ထန်းရွက်ပေချပ်များကို ပြန့်ကျဲနေတာ တွေ့ခဲ့ရပါသည်။ အဲဒီတုန်းက တန်ဖိုးရှိမှန်း မသိခဲ့ ။
ဦးပုည တိုက် ကို ကျမတို့ ကလေးများ တက်လိုက် ဆင်းလိုက် ဆော့ကစားခဲ့ကြသည် ကိုလဲ လွမ်းမိပါသည်။
သာသနာ့ရောင်ခြည်ကျောင်း ဘုန်းတော်ကြီး မှ စာရေးဆရာ အောင်ကျော်ဆန်း ရေးသော ဘဒ္ဒန္တကုဏ္ဍလမဟာထေရ် - ၀ိဇာတ ဂုဏပူဇာဝန္ဒနာ စာအုပ်ကို လက်ဆောင်ပေးပို့လာသောအခါ စာအုပ်ထဲတွင် စလေ ရာဇ၀င်များလဲ ပါသောကြောင့် ၀မ်းသာရပါသည်။
စလေ အကြောင်းအရာ ၊ သမိုင်း ၊ရာဇ၀င်များ၊ အချက်အလက် ခုနှစ် အတိအကျ ကို ထိုစာအုပ်မှ မှီငြမ်း၍ တခြား အင်တာနက်များမှလဲ ရှာဖွေ ဖတ်ပြီး ဖတ်ခဲ့ မှတ်ခဲ့ ငယ်စဉ်က ပါးစပ်ရာဇ၀င် သိခဲ့ရသည်များကို ပြန်လည် ဝေမျှ ပါသည် ။
ဦးပုည တိုက် ၊ အပေါ် နှစ်ထပ်အထိ တက်နိုင်ပြီး အဲဒီကနေ ဧရာဝတီ မြစ်ကြီး ကို လှမ်းမြင်နိုင်ပါတယ် ။ အခုဆို မြက်ပင် ခြုံ တွေ နဲ့ ယိုယွင်းနေတာ မြင်ရတော့ ၀မ်းနည်းမိပါတယ် ။
စလေရေး လို့ဆိုကြပြန် . . . "
ဟု ခေတ်ပြိုင် စာဆိုကြီး အချုပ်တန်းဆရာဖေ ၉၁၂၀၀ - ၁၂၅၆ ) ကပင်လျှင် သြချရလောက်အောင် စာဆိုကောင်းလှ သည့် ပုဂ္ဂိုလိကား စလေဆရာကြီးဦးပုည ( ၁၁၇၄ - ၁၂၂၉) ဖြစ်ပါသည် ။
စာဆို စလေဦးပုည ကို စလေမြို့၌ မဟာသမန်းရိုး ၊ ပုည သမန်းရိုး ဟူ၍ သူကြီးရိုး နှစ်ရိုး ရှိရာတွင် ပုညသမန်းရိုးဖြစ်သော အဘဦးမြတ်ထွား၊ အမိဒေါ်ဆုံ တို့မှ ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၁၇၄ ခု ကဆုန်လဆန်း ၁၃-ရက် ၊ ကြာသပတေးနေ့တွင် စလေမြို့ တိုက်စုရပ်၌ ဖွားမြင်ခဲ့ပါသည် ။ မွေးချင်းမှာ မောင်လှိူင် ဆိုသော ညီတစ်ယောက်ရှိပါသည် ။
ထိုသို့ဖွားမြင်သောနေ့မှာပင် ကြက်သွန်ခင်းဆရာတော် နှင့် မုန်ရွေးဇေတ၀န်ဆရာတော် တို့သည် ရွှေစက်တော်မှ ပြန်ကြွလာ၍ ဦးမြတ်ထွားတို့ နေအိမ်သို့ဝင်လာသည်။ ကလေးဧ။်အသွင်အပြင် လက္ခဏာ နှင့် ဗေဒင် အလိုတို့ကို ကြည့်ရှူဆင်ခြင်ရာ ကလေးမှာ ပညာရှိဖြစ်၍ လောက၌ ထင်ရှားကျော်စောမည်။ သို့သော် ဗေဒင် အလိုအားဖြင့် နြံ၈ိုလ်အပေါ်တွင် နိစ်ပြတို့ စီးနေသောကြောင့် သူတပါးဧ။် လုံ့လဖြင့် ဥပဒ်အန္တရာယ် ဖြစ်တတ်သည်။ ထိုကြောင့် သာသနာတော်ထမ်းရဟန်းဖြစ်အောင် ကြိုးစားသင့်သည် ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။
ဦးပုည ၂- နှစ်သားအရွယ်သို့ေ၇ာက်သောအခါ အဘ ဦးမြတ်ထွားမှာ သာယာဝတီမင်း၏ အကြီးတော်ဖြစ်သည်နှင့်အညီအမရပူရရွှေမြို့တော်သို့သားငယ်နှင့်အတူ ခစားရန်တက်ရောက်လာကြသည်။ သူငယ်သည် စည်တော်ရုံတွင်ရှိ်သော စည်တော်ကြီးကို ပုတ်ခတ်၍ကစားလေရာ တီးကွက်များ ပီသစွာ ထွက်ပေါ်လာသဖြင့် သာယာဝတီမင်းက မောင်ပုတ်စည် ဟု အမည်ပေးပြီး နောင်အခါ ထင်ရှားကျော်စောလိမ့်မည် ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။
မောင်ပုတ်စည် ၅ နှစ်သားအရွယ်သို့ေ၇ာက်သောအခါ စလေမြို့ တိုက်စု အရပ်၊ ခင်ကြီးစ ဦးဒီပ နှင့် တူးမောင်းဆရာတော်တို့ထံတွင် သင်ရိုးစာပေများ သင်ကြားစေသည် ။ သင်ပုန်းကြီးကို တစ်လနှင့် ကုန်၍ နောက်တစ်လတွင် မင်္ဂလသုတ် ပါဠိ၊ အနက် ၊ အောင်ခြင်းရှစ်ပါး အနက်၊ ရတနာရွှေချိုင့် ပါဠိ အနက် တို့ ကို ကောင်းစွာ တတ်မြောက်လေသည်။ ရှစ်နှစ် သို့ ရောက်လျှင် ပင် သဒ္ဒါကျမ်း နှင့် ဇာတ်တော်တို့ ကိုသာမက သဂြိုလ်စသော အဘိဓမ္မာကျမ်းများကိုလည်း သဘော ယုတ္တိ နှင့်တကွ နှူတ်တက်ေ ဆာင်နိုင်လေတော့သည် ။
ထို့နောက် တူးမောင်းဆရာတော် ပျံလွန်တော်မူသဖြင့် စလေမြို့ ခင်ကြီးသာ အား ဥပဇာယ် ပြုကာ ပုညာဘိဓဇ ဘွဲ့ဖြင့် သာမဏေအဖြစ်သို့ သွတ်သွင်းပြီးပုဂံမြို့ ရွှေကျောင်း ဒလခင်ကြီးထံတွင် ဗေဒင်ပညာရပ်များကို ၃ နှစ်တိုင်တိုင် ဆည်းပူးသင်ကြားခဲ့ပြန်သည် ။ နောက်ဆုံး၌ ဗန်းမော်ဆရာတော် ဘုရားထံတွင် သုတ် ၊ အဘိဓမ္မာ စသော ပိဋကတ်ကျမ်းဂန်များ ကို သင်ကြားခဲ့သည်။
ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၁၉၈ ခုနှစ်တွင် သာယာဝတီ အိမ်ရှေ့မင်းသည် နောင်တော် စစ်ကိုင်းမင်းအား ပုန်ကန်ရန် ရတနာသိင်္ဃ ကုန်းဘောင်မြို့ သို့ အောင်မြေနင်းရန် ချီတက်ရာတွင် ဖခင် ဦးမြတ်ထွား မှာ လမ်းတွင် စစ်ဒဏ်ဖြင့် သေဆုံးခဲ့သည်။
သျှင်ပုည ကား သာမဏေဘ၀ မှ လိင်ပြန်ကာ စလေမြို့ သို့ စုန်ဆင်းပြီး မိခင်နှင့် အတူနေ၍ ကဗျာအရာတွင် ထင်ပေါ်ကျော်စောသော ဆရာဆန်းကြီးထံ၌ ကဗျာ့သဘောနှင့် သီကုံးဖွဲ့နည်း တို့ကို ဆည်းပူးလေသည် ။ နောက် ၅လ အကြာ မိခင်ဒေါ်ဆုံမှာ ကွယ်လွန်ပြန်သည်။
သာယာဝတီမင်းလည်း နောင်တ်ာကို လုပ်ကြံ၍ ၁၁၉၉ ခုနှစ်တွင် နန်းတက်သည်။ ဦးပုည မှာ ရွှေမြို့တော်သို့ ပြန်လြာ့ပီး ဗန်းမော်ဆရာတော် ထံတွင် သာမဏေ ခံပြန်သည် ။ နောင် အသက် ၂၀ စေ့သောအခါ ရဟန်းပြုပြီး လောကီ လောကုတ္တရာ ပညာများကို အထူးပင်လေ့လားဆည်းပူးနေသည်။ ၁၂၀၃ ခုနှစ်၌ ဥက္ကလာပမြို့ (ရန်ကုန်) သို့ သာယာဝတီမင်း စုန်ဆင်းလေသောအခါ ဦးပုညမှာ လူထွက်၍ လိုက်ပါလာသည်။ ရန်ကုန်သို့ ရောက်သောအခါ ဗဟန်းတွင် ရဟန်းပြုပြန်၍ ကန်တော်ကြီး ဘွဲ့ နှင့် ဗဟန်း ဘွဲ့ တောလား များကို သီကုံး ရေးသားလေသည် ။
ထို့နောက် ဗဟန်းမှ ဇာတိ စလေမြို့ သို့ ဆန်တက်ကာ တရားစာများ နှင့် မေတ္တာစာများ ၊ ကဗျာ များစွာ တို့ ကို သီကုံးရေးသားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် သာယာဝတီမင်း နတ်၇ွာစံ၍ သားတော် ပုဂံမင်းလက်ထက်တော် ၁၂၀၀ ခုနှစ်တွင် သျှင်ပုညဘိဓဇ သည် စလေမှ အမရပူရ ရွှေမြို့ တော်သို့ ဆန်တက်လာပြန်ပြီး ဗန်းမော် ဆရာတော်ထံတွင် ဗေဒင်ကျမ်းများကို အထူးလေ့လာကာ တေးထပ်များ ဖွဲ့ဆိုခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ပုဂံမင်း နန်းကျ၍ ညီတော် မင်းတုန်းမင်း နန်းတက်လာသောအခါ လူ့ဘ၀သို့ ပြောင်းရွှေ့ပြန်သည်။ မင်းခစားအဖြစ် ၀င်ရောက် ထမ်းရွက်လေရာ မင်းလှ သင်္ခယာ ဟူသောဘွဲ့ နှင့် မြင်းခြံစီရင်စု ၊ ရွာစည်ရွာများ ကို စားရသည်။ လဘက်ရည်တော်ရာထူးဖြင့် ချီးကျူးသူကောင်း ပြုခြင်းကိုလည်း ခံရ၍ တစ်နှစ်လျှင် ရိက္ခာတော် ၆၀၀ မျှရရှိလေသည်။
ထိုသို့ အမှူထမ်းနေဆဲ ၁၂၂၈ ခုနှစ် မြင်းကွန်းမင်းသားတို့ ပုန်ကန်သည့် အရေးတွင် အခါပေးမိသည် ဆိုကာ ဖမ်းဆီး၍ မြို့သာမြို့စား မြောက်မြို့ဝန် ဦးသာအိုးလက်ထက်၌ ထားရာ၊ ဦးသာအိုးမှ မယားငယ်တစ်ဦး နှင့် မသင်္ကာပြန်သဇြင့် သူပုန်မှူနှင့် ရော၍ အသက် ၄၅ တွင်အဆုံးစီရင်ခြင်း ခံခဲ့ရလေသည်။ နောင် အရေးတော်ပုံ ကိစ္စပြီး၍ မင်းတုန်းမင်းကြီးက ဦးပုည ကို သတိရသဖြင့် မေးရာ သတ်ပစ်လိုက်ကြောင်း လျှောက်သည်။ မင်းတရားကြီးက အလွန်နှမြောတော် မူလှသောကြောင့် " ဟင် . . . လူကို ခွေးသတ်လေပြီ " ဟု မိန့်တော် မူလေသည် ။
ပုညာဘိဓဇ ဟူသော သာမဏေဘွဲ့ မှ လူဖြစ်လာသောအခါ ဦးပုည ဟု ခေါ်ဝေါ် တွင်ကျယ်သော အမည်ဖြစ်သည်။ စလေမြို့ ဇာတိဖြစ်သောကြောင့် လည်း စလေ ဦးပုည ဟူ၍ ခေါ်တွင်ကြသည်။
Posted by Thandar Lwin at Monday, November 26, 2012
ခပ်ချောချော ဘလော့ဂ်ဂါ လူပျိုကြိး တစ်ယောက် ကောင်းမှူ နဲ့ မယ်သံတို့ စင်္ကာပူ တိရိ စ္ဆာန်ရုံ ကို အလည်တစ်ခေါက် ရောက်ခဲ့ပါတယ် ။ ( ဟုတ်ကဲ့ ..သူ နဖူးပြောင်တာတော့ ထည့်မပြောတော့ပါဘူး ၊ နောက်တခါ လက်မှတ်အပိုရှိရင် မခေါ်တော့မှာ စိုးလို့ပါ ။ )
ဟုတ်ကဲ့ ...အရင်က တခေါက်မှ မရောက်ဖူးပါဘူး ။ ၀င်ကြေး ဈေးကြီးတယ် ဆိုတာရော ၊ အကောင်တွေကို ကြည့်ရမှာ ပျင်းတာရော ကြောင့်ပါ ။
သွားရင်း တွေ့လာခဲ့ သိလာခဲ့တာတွေ ထဲ က ဓါတ်ပုံ ရိုက်မိတာလေးတွေ ပြန်မျှ လိုက်ပါတယ် ။
မိချောင်းတွေ ခွဲခြားပုံပါ ။
Alligator ကတော့ အရွယ်အစား အကြီးဆုံးပါဘဲ ။
When an alligator's mouth is shut , the fourth tooth an each side of the lower jaw cannot be seen.
ပြီးတော့ Crocodile ပေါ့ ။
The fourth tooth an each side of the lower jaw can be seen whenacrocodile's mouth is shut.
လက်စသတ်တော့ အမျိုးအစား ကို သွားပေါ်တာနဲ့ ခွဲခြားတာကိုး ။
The Indian gharial has the narrowest and longest snout. It's teeth look likeazipper. Mature males haveabump at the tip of their snout.
The snout of the false gavial is elongated but not as slender as that of the Indian gharial.
Crocodile ရဲ့ ဥ ပါ ။ ဘဲဥ ခပ်ကြီး၂ အရွယ်ပါဘဲ ။ အမှန်က အရွယ်အစား ခန့်မှန်း နိုင်ဖို့ လက်နဲ့ တွဲပြီး ဓါတ်ပုံ ရိုက်ရမှာ ။
Crocodile ရဲ့ အထီး အမ က ဥ ကိုထားတဲ့ အပူချိန်အပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲ သွားတာပါတဲ့ ။ ထူးဆန်းတယ်နော် ။ ပုံ မှန် အပူချိန် ဆိုရင် အထီးလေး ပေါက်လာပြီး အပူချိန် နည်းတာ နဲ့ အပူချိန် များတာ မှာ အမ လေး ပေါက်ပါတယ် တဲ့ ။ ထူးဆန်းလို့ အဲဒီစာလေးကို သေချာဓါတ်ပုံရိုက်လာ ခဲ့တာ ပုံတွေ ကူးပြီးပြီဆိုပြီး ဖုန်းထဲက ပုံတွေ ဖျက်ပလိုက်တဲ့ အထဲပါသွားတယ် ..:(
ဒါနဲ့ အင်တာနက်ထဲ ရှာလိုက်တော့ ဒါလေးတွေ့တယ် ။ (http://www.cairnsholiday.com.au/Rainforest/crocodiles.htm)
The female buildsamound shaped nest of leaves, plants and mud. she will lay between 40 to 60 eggs of which only approximately 1% will survive to adulthood.
The temperature of incubation determine the sex ofacrocodile.
About 31.6°C for male and below 31.6°C for females
Juveniles are raised in freshwater areas, but afterafew months venture off on their own.
ဒါကတော့ အလေးချိန်ပေါ့ ။
ကဲ ကြောက်စရာ မလိုပါဘူး သားရေကွင်း နဲ့ ပါးစပ်ကို ပိတ်ထားရုံပါဘဲ တဲ့ ။
ကဲ မိချောင်း ကြီး ငိုသလား တဲ့ ကြံကြံဖန်ဖန် ...။
မိချောင်း အများစုက ရေအောက်မှာ တနာ၇ီ ထက် ပိုနေနိုင်ပါသတဲ့ ။ ဒါကြောင့်လဲ မင်းနန္ဒာ ခမျာ ငမိုး၇ိပ် ခံတွင်း မှာ အသက်ဆုံးရတာဘဲ နော် ...။
ရေအောက်ထဲ မှာ မျက်လုံးကို ကာဘို့ မျက်ခွံ ၃ခုတောင် ရှိသတဲ့ ။ ( တစ်ခု က ကက်ဆက်ဖွင့်ဘို့ တစ်ခုက.. အဲ ဟုတ်ပေါင် )
မိချောင်းတွေဟာ ရေ နက်ထဲမှာ သားကောင်ကို အလွယ်တကူ ဖမ်းနိုင်ပါတယ် တဲ့ ။
မိချောင်း အကြောင်း နဲ့ ရပ်လိုက်လို့ တိရိစ္ဆာန် ရုံထဲ မိချောင်းတမျိုး ထဲ သွားကြည့်သလား လို့ မမေး နဲ့ နော် ။ ဆားချက်တာပါ အဲ သိရအောင်လို့ပါ..:D
၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက် အင်္ဂါနေ့၊
၁၃ရ၄ သီတင်းကျွတ်လကွယ်နေ့ (ဥပုသ်နေ့)
(၁၁) မာတာပီတု ဥပဌာန မင်္ဂလာ
မိဘ နှစ်ဖြာ လုပ်ကျွေးပါ မှန်စွာ လူလိမ္မာ
အနန္တကျေးဇူးရှင် မိဘနှစ်ပါးကို လုပ်ကျွေးပြုစုနေထိုင်တာ မာတာပီတု ဥပဌာန မင်္ဂလာပဲ။
အနန္တ ကျေးဇူးရှင် မိဘနှစ်ပါးရဲ့ ကျေးဇူးကို မသိရင် ခွန်းတုံ့ခွန်းပြန် ပြောဆိုနေရင် မာတာပီတု ဥပဌာန မင်္ဂလာကို ဖျက်ဆီးနေတဲ့ သားမိုက်သမီးမိုက်ပဲ။
ယခုဘ၀ နောင်ဘ၀ ကောင်းစားရေးလိုလားသူတိုင်း မိဘဆရာသမား ဆုံးမသွန်သင်တဲ့စကားကို ရှေ့မှာရော ကွယ်ရာမှာပါ နားထောင်ကြရမယ် ။ ဒါမှသာ သားလိမ္မာ သမီးလိမ္မာတွေ ဖြစ်ကြမှာပါ ။
မိခင် ဖခင် တော်တော်များများဟာ သားသမီးတွေကို ကျူရှင်မသွား ကျောင်းမသွားရင်သာ ဆူငေါက်ပြောဆိုဆုံးမနေကြပေမဲ့ ရတနာသုံးပါး ကြည်ညိုတတ်အောင် မိဘကျေးဇူးသိတတ်တဲ့ သားသမီးဖြစ်အောင် ဆူငေါက်ပြောဆိုဆုံးမ သွန်သင်တဲ့ မိဘက နည်းလာပြီ ၊ မိဘတွေက ဆုံးမ သွန်သင်မှူ မပေးရင် မိကောင်းဖကောင်းလက္ခဏာလဲ ပျက်စီးတာပဲ ။ ကိုယ်မွေးတဲ့ သားသမီးတွေလည်း သားလိမ္မာ သမီးလိမ္မာတွေ ဖြစ်လာကြမှာ မဟုတ်ဘူး။
သားသမီးများ လိုက်နာရမယ့် မင်္ဂလာဖြစ်ပေမဲ့ မိဘများက ကိုယ့်သားသမီးကို ဆုံးမသွန်သင်မှသာ သားသမီးများ ဒီမင်္ဂလာနဲ့ ညီညွတ်ကြမှာပါ ။
လူငယ်မောင်မယ်တိုင်း မိဘဆရာသမားတွေ ဆုံးမသွန်သင်တာလည်း လိုက်နာကျင့်သုံးပါ။ မိခင် ဖခင် တို့ရဲ့ ကျေးဇူးတရားကို သိမြင်ပြီး အစားအစာ အသပြာငွေ ထောက်ပံ့ပေးပြီး ကျေးဇူးဆပ်ကြပါ ။ ခြေဆုပ်လက်နယ် ပြုပေးလို့လည်း ကျေးဇူးဆပ်ကြပါ ။ ဆုံးမသွန်သင်တဲ့ စကားအတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးပြီး အမြတ်ဆုံး ကျေးဇူးဆပ်နည်းဆိုတဲ့ တရားနဲ့လည်း ကျေးဇူးဆပ်ကာ နေထိုင်ကြပါလေ။
Posted by Thandar Lwin at Wednesday, November 14, 2012
အယင်ပို့စ်မှာ ထည့်ဘို့ ကျန်သွားတာက အုပ်တင်အခမ်းအနားပါ ။
မယ်သံ တို့ နယ်(ကျောက်ပန်းတောင်း ၊ မုံရွာ)တွေမှာ တဘက်နဲ့ တဘက် နားဖောက်ပြီးတဲ့အခါ မှာ အုပ်တင် မင်္ဂလာ ဆိုတာ လုပ်ကြပါတယ် ။
ယောင်္ကျားလေးဘက်က မိန်းကလေးဘက်ကို ဘာနဲ့ တင်တောင်းမယ့် ပစ္စည်းများကို အုပ်နဲ့ထည့်ပြီး ပြတဲ့ အလေ့အထ လို့ထင်ပါတယ် ။ သေချာ မသိပါ ။ ဂူးဂဲလ် ကြည့်တော့လဲ မတွေ့။
ရုံးက ညီမလေးတယောက် က အညာကမို့ သူများသိမလားမေးတော့ သူတို့ဘက် မြင်းခြံ တောင်သာ နွားထိုး ကျောက်ဆည် ဘက်မှာတော့ မရှိဘူးလို့ ပြောပြီး သူကြားဖူးတာကို ပြောပြပါတယ်။
အုပ်တင်ချိန်မှာ အုပ်ပွေ့ အုပ်ဖလှယ် စတာတွေ ရှိပါတယ်တဲ့ ။
အုပ်ပွေ့ဆိုတာက သတို့သားဘက်က ယူလာတာပါ တဲ့ ။ အုပ်ထဲမှာ ဆန် စပါး ၊ ကျောက်သံပတ္တမြား စတဲ့ တင်တောင်းမဲ့ ပစ္စည်းတွေ ထည့်လာရပါတယ်တဲ့ ။
အုပ်ဖလှယ် ဆိုတာက သတို့သမီးဘက် က ပြန်ပေးရတာပါ ။ အုပ်ထဲမှာ အချိုသကာထည့်ပြီး အချိုသကာ ပျိုကညာကို ပြန်ပေးပါတယ် ပေါ့လေ ။
မိန်းကလေး အိမ်ဘက်မှာ ကိုယ်ဝန်ဆောင် တစ်ယောက်ယောက် အိမ်မှာ ရှိနေခဲ့ရင်တော့ အုပ်တင်ပွဲ မလုပ်ရဘူးလို့ ပြောပါတယ် ။
မုံရွာ ဘက်မှာတော့ အုပ်ပွေ့သူ ၊ အုတ်ဖလှယ်သူတွေဟာ လူပျို ၊ အပျို ဖြစ်ရပါမယ် တဲ့ ။
တောင်းတဲ့ အချိန်မှာ သတို့သမီးလေးက အပျို စင်လေးဆိုရင် အုပ်ကို အဖုံးပ်ိတ်ပြီး တင်ရပါတယ်တဲ့ ။ တကယ်လို့ သတို့သမီးဟာ လူငယ်တို့ဘာဝ အယင်ခိုးပြေးကြပြီးမှ မိဘတွေက စေ့စပ်ဘို့ သွားတာဆိုရင် တော့ အုပ်ကို အဖုံးဖွင့်ပြီး တင်ရပါတယ်တဲ့ ။
သေချာမသိတဲ့ အကြောင်းတွေကို ပြောပြပေးတဲ့ ညီမလေး ၀တ်ရည်ထွန်း ကို ကျေးဇူးပါနော် <3 p="p">
မယ်သံ တို့တုန်းက တော့ အုပ် ကို သတို့သားဘက်က အုပ်ထိန်းသူ က ပွေ့လာပြီး ၊ အုတ်ဖလှယ် ကတော့ အိမ်ဘေး အိမ်က အမကြီးပါ ။ နှစ်ဘက်လုံး အိမ်ထောင်သည်တွေပါ ။ နေရာကွာသွားလို့ အလေ့ မတူတာလား မသိပါ။ အဲဒီ ဓါတ်ပုံတွေ လဲ ဘယ်ရောက်နေမှန်း မသိတော့ ၊ နောက်မှ ပြန်တွေ့ရင် တင်ပေးပါမယ် နော် ။
မှတ်မိသလောက်ကတော့ သူတို့ဘက်က အဖွားရယ် ၊ အဖွားက ငှက်ပျောပွဲလားမသိ ရွက်လို့ ( သနားပါတယ် နော် အလေးကြီး) ၊ နောက်က တယောက်က ဖျာ ရွက် ၊ နောက်က တယောက်က အ၀တ်အစား အုပ် ၊ နောက် မုန့်၊လဘက် အုပ် ၊ နောက်တယောက် ဆန်အုပ် ပြီးမှ သူ့မိဘတွေ နဲ့ နောက်ဆုံးက သတို့သား ပါ ။ မယ်သံတို့ကလဲ တအုပ်ကြီး ကြိုကြတာ ၊ သပြေပန်းတွေ ငွေပန်းတွေ နဲ့ သူတို့ပေးတဲ့ အုပ်ကို ယူလိုက် ပန်းပြန်ပေးလိုက်နဲ့ ။
နောက်ဆုံးက မယ်သံ ပေါ့ ။ သူ့ဗိုက်သူ သိပ်ဆာမှာ စိုးရိမ်တဲ့ အငတ်တိုင်းပြည်မှာ သေပြီး လူပြန်ဖြစ်လာတဲ့ သတို့သမီး ဟာ လူတွေစုံလာရင် ဧည့်ခံရတာနဲ့ စားချိန်မရရင် ဆာမှာစိုးလို့ အိမ်ပေါ်မှာ ကြိတ်တွယ်နေတုန်း ဗြုန်းဆို လာပြီ လာပြီ အော်သံကြားလို့ ပြေးဆင်းလာတဲ့ အခါ ခြေထောက်မှာ ဖိနပ်မပါသလို ၊ နှူတ်ခမ်းမှာလဲ ဆီတွေ ကွင်းနေပါသတဲ့ ။
ဘိသိတ် ဆရာ အလွန်အမင်း စကားကြောရှည်နေလို့ ပျင်းစရာ ကောင်းတာကလွဲရင် အဆင်ပြေပြေပါဘဲ ။ ငွေခွက်ထဲ နှစ်ဦးသားလက်နှစ်ပြီး ထားရတာ လက်ကို ကျဉ်နေတာပါဘဲ ။ ပြီးတော့ ဘိသိတ်ရေဖြန်း ၊ ပန်း နဲ့ ဆန်ပန်းပေါက်ပေါက် ကျဲသေးတယ် ခင်ညာ ။
( ဒီနေရာမှာ ကြုံတုန်းပြောရရင် အဲဒီဘိသိတ်ဆရာက လဘက်ရည်ဆိုင် ဖွင့်ထားတာပါ။ နောက်နေ့ မင်္ဂလာဆောင်နေ့မှာ သတို့သမီးမိတ်ကပ်ပြင်တာ ကြာလို့ သတို့သား လဘက်ရည်ဆိုင် ၀င်ထိုငြ့်ပီး လဘက်ရည် နဲ့ ပဲနံပြား မှာ စားတော့ သူ့ကိုကြည့်ပြီး မြင်ဖူးတယ် လို့မေးတော့ သတို့သားပါ ခညာ လို့ ပြန်ပြောတော့ မျက်လုံးပြုးပြီး ပြန်တော့ ပွဲကိုသွားတော့ လို့ဆူလွှတ်သတဲ့။ အဟုတ်ဘဲ မယ်သံတို့ ရောက်သွားချိန် မနက် ၇နာရီ ခွဲ မှာ လူ ၅၀ ကျော် ရောက်နေကြပါပြီ ။ )
ကဲ ရန်ကုန် ပုံတင်မလို့ဟာ စလေ အကြောင်းက မပြတ် ၊ ရန်ကုန်မင်္ဂလာဆောင် အကြောင်း မြန်မြန် ဖြတ်လိုက်မယ် လာလေရော့.............
မင်္ဂလာဆောင် မတိုင်ခင် လာကြတဲ့ အမျိုး ပရိတ်သတ်များနဲ့ အခန့်မသင့် စိတ်မကြည်မလင် မရှိစေချင်းငှာ တနင်္ဂနွေ မင်္ဂလာဆောင်မှာ သောကြာနေ့အထိ ရုံးတက်ပြီး စနေနေ့မှာ မနက်ထဲက အိမ်ကထွက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ဈေးသွား ၊ စားသောက် ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့် ၊ ၀ိုင်ကေကေအို ကြေးအိုးစား ၊ ၃၈ လမ်း ပန်းဆိုးတန်း ပတ် ၊ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်သွား ခေါင်းလျှော် ၊ အနှိပ်ခံ မျက်နှာဆေး ပေါင်းတင် အစရှိတာတွေ လုပ်ပြီးတာတောင်မှ ညနေ ၅ နာ၇ီဘဲ ရှိသေးလို့ ၃၈ လမ်း ညဈေး ထပ်ပတ် နဲ့ အိမ်ကို ၉ နာရီ မှ ပြန်ပြီး အိပ်ပါတယ် ။
ပုံမှန် အချိန်အတိုင်းဘဲ အိပ်ယာက ထပြီးတော့ ခါတိုင်းလို ဘရိတ်ဖတ်စ် အတွက် ပျာနေအောင်မပြင်ရဘဲ အေးဆေး နေရပါတယ် ။ ခနနေတော့ မိတ်ကပ်ပြင်မဲ့အကူတယောက်လာပါတယ် ၊ ကိုမာက နောက်ကလိုက်လာပါမယ်တဲ့ ။ သူကလဲ အောက်ခံလေးကို ရွှတ် ဆို လိမ်းပေးပြီး ဆံပင်ကို အပေါ်မှာ စုပြီး ကြက်တောင်စည်းပေးထားပါတယ် ။ မတင်းကျပ်ပါဘူး သက်သက်သာသာလေးပါဘဲ ။
ခန နေ ကိုမာရောက်လာ အပေါ်မှာ မိတ်ကပ် အရောင်တင် ၊ ဆံပင် ကို ပုံဖော် ပန်းကပ်ပန်ပေြး့ပီး ပြီးသွားပါတယ် ၊စိတ်အထင် နာ၇ီဝက်မကြာပါဘူး ။ ဘာလိုသေးလဲ မေးလို့ မှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ စိတ်တိုင်းကျ ကျေနပ်ပါတယ် ။ မနက်အစောကြီးထပြီး ၂နာရီကျော်ကြာအောင်ပြင်ရတဲ့ စလေ က မိတ်ကပ်သမားကို သတိရမိပါတယ် ။ ထွက်လာတော့ မိတ်ကပ်ထူလပျစ် နဲ့ အညာနေပူပူမှာ နေရခက်လှပါတယ် ။
ရန်ကုန် က ပုံလေးတွေပါ ။
မယ်သံ တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်လေးဟာ နှစ်ဖက်မိဘ ဆွေမျိုး မိတ်ဆွေ တွေ ရဲ့ ကျေနပ်ခြင်း ၊ ကိုယ်တိုင် နှစ်ဦး ကျေနပ်ခြင်း ၊ ကိုယ့်ဝန် ကိုယ့်အား နဲ့ တတ်နိုင်သလောက်လေးဘဲ လုပ်ခဲ့တာမို့ Stress မများဘဲ သာသာယာယာ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ် ။
သူများတွေ လို တသက်မှာ တခါ ဆောင်ရတာမို့ ဟိုလို လုပ်မယ် ဒီလို လုပ်မယ် ဆိုပြီး အားတက်သရော တွေးတော စဉ်းစားပြီး မလုပ်ခဲ့တာမို့ ရိုမန်းမတစ်ဘူး ဆိုချင်ဆို ဒီလို နှစ်ကိုယ်ဘ၀ အစပြုချိန်မှာ တဘက် နဲ့ တဘက် စိတ်မကွက် စိတ်မထင့်ဘဲ အေးအေးဆေးဆေး သာယာ ပြီးဆုံးသွားခဲ့တာဟာ ကျေနပ်စရာဘဲ မဟုတ်ပါလားရှင် ။
ရေရှည် လက်တွဲပြီး အကောင်း အဆိုး မှန်သမျှ အတူရင်ဆိုင်ရမဲ့ အကြောင်းတွေ အများကြီး ရှိနေသေးတာမို့ နှစ်ကိုယ်တူ ဘ၀ စကြတော့မဲ့ မောင်မယ်များ စ လုံးရေ စ ကြမဲ့ ဒီကာလ မှာ Energy တွေ အများကြီး မဖြုန်းမိစေဘဲ နှစ်ဦး နှစ်ဖက် ကျေနပ် သာယာ အေးချမ်း ပျော်ရွှင်ကြပါစေကြောင်း ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ် ရှင် ။
Posted by Thandar Lwin at Thursday, November 08, 2012
၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊
၁၃ရ၄ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၈ ရက် (ဥပုသ်နေ့)
နှူတ်လည်းချိုသာ မှန်ကန်စွာ ပြောကာနေထိုင်ပါ။
နှူတ်ကချိုသာပြီး လိမ်ညာမှူ မပါဝင်စေဘဲ ပြောဆိုနေထိုင်တာ သုဘာသိတ၀ါစာ မင်္ဂလာပါပဲ။
လူငယ် လူရွယ်တွေ မလိမ်တတ် မညာတတ်အောင် ဆရာ ဆရာမတွေက သင်ပြပေးဖို့ လိုတယ်။
စီးပွားရေးကိုလည်း အထောက်အပံ့ ပေးပါတယ်။
သူတကာကို လိမ်ညာနေတာထက် မိမိကိုယ်ကို မလိမ်မညာမိဖို့အရေးကြီးတယ်။ ရှေးဘ၀များစွာက မိမိကိုယ်ကို လိမ်ညာခဲ့လို့ သံသရာရှည်နေရတာကို သတိပြု နားလည်ပါ။
ဆရာတော် သံဃာတော် တွေ နဲ့ မိဘ ဆရာသမားတွေက ဆုံးမရင် ရှေ့မှာတော့ ငြိမ်နေတယ်။ နားထောင်ပါမယ်လို့ အကြိမ်ကြိမ် ကတိတွေ ပေးကြပေမဲ့ ကွယ်ရာမှာ လုပ်ချင်ရာ လုပ်နေသူတွေဟာ မိမိကိုယ်ကို လိမ်ညာနေတာပဲ ။ ဒါတွေကို သတိပြု ရှောင်ကြဉ်ရမယ်။ သူတော်စင်တိုင်း မှန်ကန်ချိုသာတဲ့ စကားကို နေ့စဉ်ပြောဆို နေထိုင်ကြပါလေ။
Posted by Thandar Lwin at Wednesday, November 07, 2012
သီတင်းကျွတ်ပြီဆိုတော့ မင်္ဂလာဆောင် ဖိတ်စာ လေး တွေ တဖွဲဖွဲ ရောက်လာပါပြီ ။
မင်္ဂလာဆောင် ဆိုတာ တတ်နိုင်ရင် တတ်နိုင်သလို ၊ ကာယကံ ရှင်တွေ ရဲ့ စိတ်ကူးလေးတွေကို အကောင်အထည်ဖော် တာရော ၊ သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက် လိုချင်တာလေးတွေကို ညှိကြတာရော မို့ စိတ်ရော လူပါ အနည်းနဲ့ အများပင်ပန်းကြမှာပါ ။ ခုခေတ် မင်္ဂလာဆောင်တွေ အတော်များများက မိဘချင်းသဘောတူတယ် ဆိုတာထက် ကိုယ်တိုင် ချစ်ခင်ကျေနပ်ကြလို့ ဖြစ်လာကြတာတွေ များတာမို့ ပင်ပန်းနေပေမဲ့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးကြမှာ အမှန်ပါ ။
သူများ မင်္ဂလာဆောင် ဖိတ်စာလေးတွေ ကြည့်ရင်း လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ်က မယ်သံတို့ မင်္ဂလာဆောင်လေး ကို ပြန်မြင်ယောင်မိရင်း မှတ်မိသလောက်ကို အမှတ်တယ မှတ်တမ်းတင်ထားချင်ပါတယ် ရှင် ။
မယ်သံ တို့ နှစ်ယောက် နှစ်ဖက်မိဘ များကို အသိပေးပြီး အသိအမှတ်ပြု ကျေနပ်လက်ခံကြတယ်ဆိုတော့ တရားရုံးချုပ်မှာ သွားပြီး နှစ်ဦးသဘောတူ လက်မှတ်ထိုးကြပါတယ် ။ မိဘတွေက နယ်မှာပါ ။ ကိုချစ်မောင်က နိုင်ငံခြား သွားချင်လို့ ကြိုးစားနေတဲ့အချိ်န် ၊ သူ့ အေးဂျင့်က သွားရခါ နီးပြီလို့ ပြောတော့ လက်မှတ်ထိုးထားကြမယ် လို့ တွေးပြီး စီစဉ်လိုက်တာပါဘဲ ။ မင်္ဂလာဦး မှာ အလှူတစ်ခု ပြုကြမယ် ဆိုပြီး ဇီဝိတ ဒါန သံဃာ့ ဆေးရုံကြီးမှာ သွားပြီး လှူပါတယ် ။
ဘုန်းတော်ကြီးက မင်္ဂလာဦးဆုံးမတရားဟော ဆုတောင်းပေး ပြီး အလှူအတွက် ရေစက်ချ နဲ့ အတော် ကို ကြည်နူးစရာပါ ။
အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့် ကိုချစ်မောင် သွားဘို့ လာဘို့ ကြန့်ကြာနေချိန် ၊ မယ်သံ အမေ လဲ ရန်ကုန် လာလည်ချိန် မှာ ကိုချစ်မောင်တို့ မိဘတွေ အမေ့ကို လာတွေ့ ပြီး မင်္ဂလာကိစ္စ ပြောကြတော့ မယ်သံ တို့ မြို့မှာ မင်္ဂလာဆောင် လုပ်မနေတော့ဘဲ မယ်သံတို့ ၂ယောက်လုံး ရဲ့ အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေများ ရာ ရန်ကုန်မှာဘဲ လုပ်ကြဘို့ အတည်ပြုခဲ့ပါတယ် ။
မယ်သံကတော့ ကိုယ့်အပေါင်းအသင်းတွေ ဆိုတာကလည်း လူငယ်တွေဘဲမို့ မင်္ဂလာဆောင် အခမ်းအနား လုပ်မနေတော့ဘဲ ဆိုင်ကောင်းကောင်း တစ်ဆိုင်မှာ သာ ကျွေးတော့မယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ် ။ ဟိုဘက် မှာ ကိုချစ်မောင် သွားဘို့ လုပ်ထားတာ နဲ့ အကုန်များနေတာရော ၊ အဆင်သိပ်မပြေတာကို သိတော့ မလိုအပ်ဘဲ ငွေကုန်ခံ စိတ်ရှုပ်မနေစေချင်တဲ့ သဘောပါ ။ မင်္ဂလာဆောင် တစ်ခု စီစဉ်ရာမှာ ငွေကြေး တတ်နိုင်ရင်တောင်မှ စီစဉ် ရတာတွေ များပြီး စိတ်ရှုပ် အလုပ်ရှုပ်ကြ ရ တာကို သိထားသလို နှစ်ဖက်မိဘ တွေ ကလဲ နယ်မှာ ဆိုတော့ ရန်ကုန်က ကိစ္စတွေ ကိုယ်တိုင်ကြဲ ရမှာမို့ အပင်ပန်း မခံချင်တာလဲ ပါပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ ကိုချစ်မောင်ကတော့ မင်္ဂလာဆောင် အခမ်းအနား လုပ်ချင်ပြီး သူတတ်နိုင်သလောက် လုပ်မယ် လို့ ဆိုပါတယ် ။ ဒီတော့ လဲ လုပ်ရမဲ့ အစီအစဉ် တွေ ကို အယင်ချရေး ရပါတယ် ။ ဒီနေရာမှာ မယ်သံ့ သူငယ်ချင်း မနီလာစိုး က အဓိက အခန်းက ပါဝင်ကူညီပါတယ် ။ သူ နဲ့ ကိုချစ်မောင် တို့ တိုင်ပင်ကြ ဆွေးနွေးကြတာ ကို မယ်သံက ဘေးကနေ လဘက်သုပ်ပေး ခေါင်းညိတ်ပေး နဲ့ တတပ်တအားပါဝင် ခဲ့တာပါ ...:D
မင်္ဂလာဆောင် အခမ်းအနား မလုပ်ချင်ဘူး ဆိုပေမဲ့ တကယ်လဲ လုပ်ဖြစ်မယ် ဆိုရော မယ်သံက
၁) ဇီဝိတ ဒါနသံဃာ့ ဆေးရုံကြီးက ခန်းမ မှာ လုပ်ချင်တယ် ။
၂) ထမင်း (သို့) ၀လင်တဲ့ အစားအစာ ကျွေးချင်တယ် ။ ( ရေခဲမုန့် ကိတ်မုန့် စသဖြင့် မကျွေးချင်ဘူး ) နဲ့
၃) ကက်တလီယာ သစ်ခွပန်း ပန်ချင်တယ် ။
ဆိုပြီး တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ် ။
ပထမ ဆုံး သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက် ဖိတ်မဲ့ လူတွေ စာရင်းရေး ၊ လူစာရင်းရတာ နဲ့ ဇီဝိတ ဒါန သံဃာ့ဆေးရုံကြီး ကို သွားပြီး ရက်ယူရပါတယ် ။ တခါထဲ ဘာကျွေးမလဲ ရွေးရပါတယ် ။ ထမင်း+ကြက်သား+အသားနောက်တမျိုး+ဟင်းရည်+ဘာလချောင်ကြော်+အရွက်ကြော် သို့ အသုတ် သို့မဟုတ် ထောပတ်ထမင်း + ကြက်သား+ဆိတ်သား+ချဉ်ဟင်း+ဘာလချောင် စသဖြင့် ကြိုက်ရာ အတွဲကို ရွေးလို့ရပါတယ် ။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်က တယောက် ၁၂၀၀ကျပ် နှူန်းပါ ။
ကိုယ်တိုင်လဲ အစားအသောက် ၀ါသနာပါပြီး သူများကိုလည်း အင်မတန်ကျွေးချင်လှတဲ့ မယ်သံ က အဲဒီ အတွဲနဲ့ တင်မကျေနပ်ပါဘူး ။ ထပ်ထည့်ပါတယ် ။
ထမင်း+ကြက်သား+၀က်သား( ဘုန်းကြီးပွဲအတွက် တော့ငါး) +ငါးဖယ်သုပ်+ သီးစုံချဉ်ရည်+ ငါးပိတစ် ငါးပိချက်ပါ ။နောက် ရေခဲမုန့် ပါ ထပ်ထည့်ပါတယ် ။ ရေသန့်၊ အချိုရည် ၊ တစ်ရှူးက ကာယကံရှင်တွေ ၀ယ်ထည့်ရပါတယ် ။ သူတို့က ခန်းမ အလှ ဆင်တာ နဲ့ ပန်းထိုးတာ လုပ်ပေးပါတယ် ။ ခန်းမ ငှားခ က ၃၀၀၀၀ကျပ် ပါ ( မသေချာ) ။
ခန်းမ ရက်ချိတ်ပြီးတာနဲ့ ဖိတ်စာ အပ်ကြပါတယ် ။ စာစီပေးပြီး ဖိတ်စာဒီဇိုင်းရွေးရင် လဲ သူကြိုက်တာ တမျိုး ကိုယ်ကြိုက်တာ တမျိုး စိတ်ရှုပ်ရမှာမို့ မလိုက်တော့ဘူးဆိုတာကို ဇွတ်ခေါ်တာနဲ့ လိုက်သွားပြီး ဈေးအလယ်အလတ် ရှိတာ ကို ရွေးလာပါတယ် ။ ( မယ်သံကတော့ ဘာဝယ်ဝယ် ဈေးအရင်ကြည့်ပါတယ် )
ကိုချစ်မောင်လဲ တသက်မှာ တခါဆောင်ရတဲ့ ကိုယ့်မင်္ဂလာဆောင်ကို ဖြစ်ကလတ်ဆန်း လုပ်တဲ့ မယ်သံ့ကို စိတ်ကုန်သွားတယ် ထင်ပါတယ် ။ အိပ်ယာ အခမ်းအနား ၊ ခုတင် ၊ မိတ်ကပ်အပ်တာ(ကိုမာ) ၊ဓါတ်ပုံ ၊ ဗွီဒီယို ရိုက်ကူးရေး စတာတွေကို သူ့ဟာသူ ဘဲ စီစဉ် ပါတော့တယ် ..:P
(ဒါတွေ စီစဉ်ရတာ မင်္ဂလာဆောင်မတိုင်ခင် ၆ လ လောက်အလိုထဲကပါ)
အဲ ၀တ်စုံ အတွက် ဗိုလ်ချုပ်ဈေးသွားတော့ မလိုက်မဖြစ် လိုက်ရပါတော့တယ် ။ ကိုချစ်မောင် နဲ့ မနီလာ တို့ တဆိုင်ဝင် တဆိုင်ထွက် အဆင်တွေ အရောင်တွေ ချိ်တ်တွေ ကြည့်ကြချိန်မှာ တော့ သူတို့တွေ စကားပြောတဲ့ အလစ်မှာ မုန့်တွေ သွားကြိတ်ပါတယ် ။ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးက မုန့်တွေက အကုန်ဆွဲဆောင်မှူ ရှိတယ် မဟုတ်လား ရှင်...:D
သူတို့ဘဲ လက်ဝတ်လက်စား ရွေး ၊ ဖိနပ်အပ် လုပ်ကြပါတယ် ။ ဖိနပ်အရောင် ကို ချိတ်အရောင် နဲ့ ရွေးပြီး စီးကွင့် ထိုးဘို့ အပ်ကြတော့ တခဏတာ အခန်းအနား အတွက် အချိန်ပေးရ ငွေကုန်ရတာတွေကို တရားကျမိပါတယ် ။ ကျမ လိုလူ ဧည့်သည် ဆိုရင်တော့ ဘာဖိနပ် စီးနေပါလဲ စိတ်ဝင်စားမှာ မဟုတ်ပါဘူးး ဘာကျွေးမလဲ ပဲ စိတ်ဝင်စားမှာပါ ။
ရန်ကုန်မှာ မင်္ဂလာဆောင်ဘို့ စီစဉ်တာတွေ ပြီးသလောက်မှာ နယ်က အမေ့ဆီက ဖုန်းလာပါတယ် ။ မယ်သံ ရန်ကုန်မှာ မင်္ဂလာဆောင်မယ် ဆိုတော့ စလေက လူတွေက စလေမှာလဲ လာဆောင် ရမယ် ၊ စလေမှာ ဧည့်ခံပွဲ လုပ်ပေးရမယ် ဆိုလို့ စလေ မှာအယင်လာဆောင်ဘို့ ပြောတာပါ ။ စလေ က ကိစ္စတွေကို သူတို့ တာဝန်ယူ လုပ်ပေးကြမှာ ဖြစ်ပြီးအ၀တ်အစားရယ် ၊ ဖိတ်စာရယ် ကို မယ်သံတို့ ရန်ကုန်က စီစဉ်လာဘို့ပြောပါတယ် ။
ဒါနဲ့ ၀တ်စုံချုပ်ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းဆီ သွားပြီး စောချုပ်ပေးဘို့ အကြောင်းသွားပြောတော့ တစ်စုံထဲကို နှစ်နေရာ မ၀တ် နဲ့ လို့ပြောပြီး နောက်တစုံ စီစဉ်ခိုင်းပါတယ် ။ မယ်သံ လဲ အကုန်အကျများလို့ မစီစဉ်တော့ကြောင်းပြောတော့ သူဘဲ စီစဉ်ပေးလိုက်မယ် ဆိုပြိး နောက်တစုံ ချုပ်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ရိုးရိုး ပိုးသားဝမ်းဆက်ပေါ် စီးကွင့်ထိုးပေးလိုက်တာပါ ။ မယ်သံဖြင့် ချိတ်ထက်တောင် ကြိုက်ပါသေးတယ်။
ကိုယ့် မင်္ဂလာပွဲ ကိစ္စအတွက် မယ်သံတို့ အပင်ပန်းအခံဆုံး လုပ်တာက ပန်းရှာတာပါ ။ ကက်တလီယာ ပန်ချင်လှတာကြောင့် ပန်းခြံတွေ ကမ္ဘာအေးမှာ မြောက်ဥက္ကလာမှာ သာကေတ မှာ တခြံဝင် တခြံထွက် ရှာလိုက်ရတာ အရောင်က နို့နှစ်မို့ အဖြူရှာတာ အ၀ါရောင် ခရမ်းရောင်တွေဘဲတွေ့လို့ စိတ်ညစ်ရသလို သူတို့က နယ်ကိုဆို ရေခဲပုံးနဲ့ ထုတ်မှ အဆင်ပြေမယ် ကက်တလီယာ က နုတယ် နဲ့ ပြောကြတော့ စိတ်လျှော့ပြီး ဗင်ဒါ ဘဲ ရွေးလာခဲ့ရပါတယ် ။
ဒီကြားထဲ မယ်သံ တို့ က ရန်ကုန် ရုံးချုပ်ကနေ ပျဉ်းမနား ပရောဂျက်အတွက် ပစ္စည်းတွေ တွက်ချပေးနေတဲ့အချိန် အလုပ်များ နေချိန်မို့ မင်္ဂလာဆောင် အတွက် ခွင့် ၄ ၇က်ဘဲရခဲ့ပါတယ် ။
စလေမြို့ ဦးပုည ခန်းမဆောင် မှာ ကျင်းပတဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ပါ ။
ပန်းကြဲ နှင့် အရန် များ
နှစ်ဖက် မိဘ များနှင့်
သတို့သား ကို ပန်းကုံးစွပ်
မယ်သံ့ ကို ပန်းကုံး စွပ်
အရန် နှစ်ယောက် နဲ့ အတူ
သတို့သား သတို့သမီး လိုက်ဖက်ညီပါ ရဲ့လားရှင် ။
ကြိုးကို ခန်းမ က အထွက်ထဲက တားသတဲ့ ..နောက်ဆုံး လူတွေ ပြုံ တိုးကြလို့ တယောက်စီ မပေးတော့ဘဲ ၂၀၀ တန် တစ်အုပ်ကို ကျဲချလိုက်ရတယ် ။
ကြိတ်ခေါက်ဆွဲ ကျွေးတာပါ ။ တချို့ က မနက်တခါ လာစားပြီး နေ့လည်စာ ပါ နောက်တခေါက်လာစားကြပါတယ် ။ ပျော်စရာပါ ။ မနက် ၆ နာရီ က စတဲ့ မင်္ဂလာပွဲ နေ့လည် တစ်နာရီလောက်မှ ပြီးပါတယ် ။ အလှပြင်ဘို့ မနက် ၃နာ၇ီ ခွဲထဲက ထရတော့ အတော် ပင်ပန်းနေပါပြီ ။
အမေ့ အစီအစဉ် အရ မြို့ ပတ်ပြီး ဗီဒီယို ရိုက်ရမှာပါ ။ အဓိက ဘုရား တွေ သွား ကြည်၂နူး၂ ဖူး ဆုတောင်း ၊ စသဖြင့်ပေါ့လေ ။
ဒါပေမဲ့ အညာနေ ပူပူ မှာ လူတွေက ပင်ပန်းထားတာကြောင့်ရော ၊ ဘူရားတွေ ပေါ် ဖိနပ်ချွတ်ရတော့ ခြေထောက်ပူတာရော နဲ့ ဘယ်လို မှ မပြုံးနိုင်တော့ပါဘူးး။ မျက်မှောင် ကုတ်ပီး နှူတ်ခမ်း ကို ဖြဲထားရတာ အတော် ကြည့်ရဆိုးမှာပါ ။
စလေ စက်ရုံက ရေသန့်စင်ပြိး ပိုတဲ့ ရေတွေကို ပြန်လွှတ်တဲ့နေရာမှာ ချောင်းလေး လို လှလှပပ နေရာမှာ သတို့သားကို ရေလှမ်းပက်နေတဲ့ ပုံ ရိုက်ဘို့ ဗီဒီယို ဆရာ က ညွှန်ကြားချိန်မှာတော့ ဘယ်လိုမှ ရိုမန်းမတစ်နိုင်တော့ဘဲ ဒေါသ ထွက်ရပါတော့တယ် ။
ဗီဒီယို ဆရာ ကလဲ ဘယ်နေရာမှ မချန်ထားခဲ့ ချင်တာကြောင့် နောက်ဆုံး အမေတို့က ပင်စင်ယူခါနီး မို့ စလေ ရှူခင်းတွေ ကို အမှတ်တရ ယူချင်တာ ဖြစ်ကြောင်း မယ်သံ တို့ မပါ လဲ ဘာမှ မဖြစ်ကြောင်း သေချာပြောပြပြီး သူ့ဟာသူ နေပူထဲ မှာ ရှူခင်းတွေ လိုက်ရိုက်ပြီး ကိုယ်တွေက နေရိပ်အောက်မှာ ထိုင်စောင့်ကြပါတယ် ။
ကိုချစ်မောင်တို့ တည်းတဲ့ Guest House မှာ တခန်းပြင်ထားပြီး မင်္ဂလာဦးအခန်းရယ်လို့ ညဘက်မှာ သတို့သမီးကို အပ်မယ်လို့ စီစဉ်ထားပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ အိမ်မှာ သူငယ်ချင်းတွေလာပြီး ကာရာအိုကေ ဆိုကြ ၊ စကားပြောကြ ရင်းနဲ့ ညဉ့်နက်သွားလို့ ကိုယ့်အိမ်မှာ ကိုယ်ဘဲ အိပ်လိုက်ပါတယ် ။သတိုးသား ကတော့ တမျှော်မျှော် နဲ့ ပေါ့လေ ။
နောက်တနေ့ မနက်အစော မှာတော့ သတိုးသား နှင့် သူ့မိဘ ဆွေမျိုးများက အညာရောက်တုန်း ပုဂံ ညောင်ဦး ဘုရားဖူးဘို့ ထွက်သွားကြပြီး မယ်သံကတော့ အဲဒီနေ့ ညနေကားနဲ့ ရန်ကုန်ကိုပြန်ပြီး ရန်ကုန်မှာ ကားအ၀င်နောက်ကျ တာမို့ ရုံးကို တိုက်ရိုက် သွားလိုက်ရပါကြောင်း ..........။
ပို့စ် က အရမ်းရှည်သွားတာကြောင့် ရန်ကုန် မင်္ဂလာဆောင် ပုံတွေကို နောက်တပို့စ် ကျမှ ထပ်တင်ပါ့မယ် ရှင် ။
အချိန်ပေးပြီး လာဖတ်ကြတာ ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ လာဖတ်ကြသူ အားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ရွှင်လန်း ချမ်းမြေ့ကြပါစေ လို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် ရှင် ။
Posted by Thandar Lwin at Thursday, November 01, 2012